Things To Tell Your Daughter About Puberty - My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
အပြိုဖျောဝငျခါနီး သမီးလေးကို ဘာတှပွေောပွမလဲ?
ဒါသမီးမှေးထားတဲ့ မိဘတိုငျး ကွုံတှဖွေ့တျသနျးရမယျ့ ကိစ်စတဈခုပါ။
ပွောငျးလဲလာမယျ့ ခန်တာကိုယျ သဘာဝဖွဈစဉျတှကေို မပွောဘဲထားတာမြိုးဆို ကလေးအနနေဲ့ တုနျလှုပျစရာဖွဈစပေါတယျ။
မြိုးပှားအဂါင်္ပွောငျးလဲမှု၊ စိတျပွောငျးလဲမှုတှနေဲ့ပတျသကျလို့ ပုံမှနျလူတိုငျးကွုံတှရေ့မယျ့အရာလို့ ကွိုပွောပွထားခွငျးဟာ ဆယျကြျောသကျအရှယျ သမီးငယျကို သဘာဝကကြလြကျခံဖို့ အသငျ့ဖွဈစပေါတယျ။
ဒါဆို ဘာတှကေိုပွောပွထားကွမလဲ ဖတျကွညျ့ရအောငျလား….
ခြိုငျးကွားပေါငျးကွားတှမှော အမှေးအမြှငျတှပေေါကျလာတတျတယျ။ အရပျရှညျထှကျလာတတျတယျ ဆိုတာမြိုးပွောပွထားနိုငျပါတယျ။
-> ဘယျအရှယျမှာ ရာသီပနျးပှငျ့တတျသလဲ ကွိုပွောပွထားနိုငျပါတယျ။
မြိုးရိုး ဖှံ့ဖွိုးမှုပျေါမူတညျပွီး အသကျ ၇နှဈမှ ၁၃နှဈတှငျးဖွဈနိုငျပါတယျ။ အသကျ ၁၅နှဈကြျောအထိ ရာသီပနျးမပှငျ့ဘူးဆို မိဘတှအေနနေဲ့ ဆရာဝနျနဲ့ဆှေးနှေးပါ။
မိနျးမကိုယျမှ ပထမအကွိမျအဖွဈ သှေးဆငျးခွငျးဖွဈတယျဆိုတာ ပွောပွထားပါ။ သှေးဆငျးခွငျးမှာ သှေးစကျမြား အတှငျးခံတှငျ စှနျးထငျးခွငျးဖွဈလြှငျ အမကေိုပွောပွဖို့ကွိုပွောပွထားပါ။ ရာသီမှာ အမြားအားဖွငျ့ တဈလတဈခါ ၊ တဈလခှဲတဈခါ လာတတျကွောငျး၊ တဈခါလာလြှငျ ၃ရကျမှ ၇ရကျခနျ့ကွာတတျကွောငျး ကွိုပွောပွပေးထားခွငျးက သမီးငယျကိုကိုယျတှငျးပွောငျးလဲမှုဖွဈစဉျကို ကွိုသိထားစလေို့ ထိတျလနျ့မှုသကျသာစပေါတယျ။ ရာသီပနျးသညျ တဈလ တဈခါ ပုံမှနျပှငျ့ရမညျ။ လစဉျရာသီလာသောရကျကို ပွက်ခဒိနျတှငျမှတျထားရနျပွောပွထားပါ။ ရာသီမလာလြှငျ အမကေို ပွောပွရနျလိုကွောငျးလညျး အသိပေးထားပါ။ ရာသီလာခွငျးနဲ့အတူ၊ မမြိုးဥကွှခွေငျးဖွဈ၍ ဆနျ့ကငျြဘကျလိငျနှငျ့ ဆကျဆံနထေိုငျမိပါက တဈကွိမျတဈခါပငျဖွဈစေ ကိုယျဝနျရသှားနိုငျကွောငျး ရှငျးလငျးပွောပွထားသငျ့ပါတယျ။
( အသိမပေးထား၍ ၊ နားမလညျဘဲ မှားသှားခွငျးမြိုး မဖွဈရအောငျပါ။) ရာသီလာခွငျးမှာ တဈလတဈခါ မဟုတျဘဲ တဈခါတဈခါ ( ကိုယျခန်ဓာပိနျသှားခွငျး၊ ဝလာခွငျး၊ အစားလြှော့စားခွငျး တို့ကွောငျ့ ) လကြျောသှားခွငျးမြိုးဖွဈတတျကွောငျး မိဘမြားအနနှေငျ့လညျး သိထားသငျ့ပါတယျ။ ကဲဒီလောကျဆို ဘာတှပွေောပွသငျ့တယျဆိုတာလေး သိသှားလောကျပွီထငျပါတယျ။
အပျိုဖော်ဝင်ခါနီး သမီးလေးကို ဘာတွေပြောပြမလဲ?
ဒါသမီးမွေးထားတဲ့ မိဘတိုင်း ကြုံတွေ့ဖြတ်သန်းရမယ့် ကိစ္စတစ်ခုပါ။
ပြောင်းလဲလာမယ့် ခန္တာကိုယ် သဘာဝဖြစ်စဉ်တွေကို မပြောဘဲထားတာမျိုးဆို ကလေးအနေနဲ့ တုန်လှုပ်စရာဖြစ်စေပါတယ်။
မျိုးပွားအဂါင်္ပြောင်းလဲမှု၊ စိတ်ပြောင်းလဲမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ ပုံမှန်လူတိုင်းကြုံတွေ့ရမယ့်အရာလို့ ကြိုပြောပြထားခြင်းဟာ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ် သမီးငယ်ကို သဘာဝကျကျလက်ခံဖို့ အသင့်ဖြစ်စေပါတယ်။
ဒါဆို ဘာတွေကိုပြောပြထားကြမလဲ ဖတ်ကြည့်ရအောင်လား….
ချိုင်းကြားပေါင်းကြားတွေမှာ အမွှေးအမျှင်တွေပေါက်လာတတ်တယ်။ အရပ်ရှည်ထွက်လာတတ်တယ် ဆိုတာမျိုးပြောပြထားနိုင်ပါတယ်။
-> ဘယ်အရွယ်မှာ ရာသီပန်းပွင့်တတ်သလဲ ကြိုပြောပြထားနိုင်ပါတယ်။
မျိုးရိုး ဖွံ့ဖြိုးမှုပေါ်မူတည်ပြီး အသက် ၇နှစ်မှ ၁၃နှစ်တွင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အသက် ၁၅နှစ်ကျော်အထိ ရာသီပန်းမပွင့်ဘူးဆို မိဘတွေအနေနဲ့ ဆရာဝန်နဲ့ဆွေးနွေးပါ။
မိန်းမကိုယ်မှ ပထမအကြိမ်အဖြစ် သွေးဆင်းခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာ ပြောပြထားပါ။ သွေးဆင်းခြင်းမှာ သွေးစက်များ အတွင်းခံတွင် စွန်းထင်းခြင်းဖြစ်လျှင် အမေကိုပြောပြဖို့ကြိုပြောပြထားပါ။ ရာသီမှာ အများအားဖြင့် တစ်လတစ်ခါ ၊ တစ်လခွဲတစ်ခါ လာတတ်ကြောင်း၊ တစ်ခါလာလျှင် ၃ရက်မှ ၇ရက်ခန့်ကြာတတ်ကြောင်း ကြိုပြောပြပေးထားခြင်းက သမီးငယ်ကိုကိုယ်တွင်းပြောင်းလဲမှုဖြစ်စဉ်ကို ကြိုသိထားစေလို့ ထိတ်လန့်မှုသက်သာစေပါတယ်။ ရာသီပန်းသည် တစ်လ တစ်ခါ ပုံမှန်ပွင့်ရမည်။ လစဉ်ရာသီလာသောရက်ကို ပြက္ခဒိန်တွင်မှတ်ထားရန်ပြောပြထားပါ။ ရာသီမလာလျှင် အမေကို ပြောပြရန်လိုကြောင်းလည်း အသိပေးထားပါ။ ရာသီလာခြင်းနဲ့အတူ၊ မမျိုးဥကြွေခြင်းဖြစ်၍ ဆန့်ကျင်ဘက်လိင်နှင့် ဆက်ဆံနေထိုင်မိပါက တစ်ကြိမ်တစ်ခါပင်ဖြစ်စေ ကိုယ်ဝန်ရသွားနိုင်ကြောင်း ရှင်းလင်းပြောပြထားသင့်ပါတယ်။
( အသိမပေးထား၍ ၊ နားမလည်ဘဲ မှားသွားခြင်းမျိုး မဖြစ်ရအောင်ပါ။) ရာသီလာခြင်းမှာ တစ်လတစ်ခါ မဟုတ်ဘဲ တစ်ခါတစ်ခါ ( ကိုယ်ခန္ဓာပိန်သွားခြင်း၊ ဝလာခြင်း၊ အစားလျှော့စားခြင်း တို့ကြောင့် ) လကျော်သွားခြင်းမျိုးဖြစ်တတ်ကြောင်း မိဘများအနေနှင့်လည်း သိထားသင့်ပါတယ်။ ကဲဒီလောက်ဆို ဘာတွေပြောပြသင့်တယ်ဆိုတာလေး သိသွားလောက်ပြီထင်ပါတယ်။
V- Shaped Face